Shabaab oo la wareegay gaari xamuul oo saad & sahay u waday Ciidanka Kenya | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
Shabaab oo la wareegay gaari xamuul oo saad & sahay u waday Ciidanka Kenya
Xoogaga Ururka Al Shabaab, ayaa caawa la wareegay gaari xamuul ahaa oo saad iyo sahayba u siday Ciidanka Militariga Kenya, ee qaybta ka ah Xoogaga Nabad Ilaalinta ee Midowga Afrika.
Kolonyo ay wateen Ciidanka Kenya oo maanta ka yimid dhinaca xuduuda Kenya, kuna wajahnaa Deegaanka Buusaar, oo 40km u jira Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, ayaa waxaa uu galabta roob xoogan uu ku hakiyay Deegaanka Budada, oo 5km u jira Ceelwaaq.
Wararka, ayaa waxay intaa ku darayan in caawa ay weerar ku soo qaadeen dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab, iyagoona goobtaasi ka jiitay mid ka mid ah gaadiidkaasi. Ciidanka Kenya waxaa la soo sheegaya in ay awoodi kari waayeen in gaariga ay ka difaacdaan Shabaabka.
Ilo wareedyo, ayaa sheegaya in gaarigaasi uu waday dareys ciidan, rasaas, raashiin iyo weliba dawo, waxaana la hadalhaya in Shabaabku ay ula dhaqaaqeen dhinaca wadada aadda Faa-faaxdhuun.
Sarkaal ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo magaciisa ka gaabsaday, ayaa sheegay in roob mahiigan uu tan iyo galabta ka da’ayo Deegaanka Budada, isla-markaana ay taasi Shabaabka ka caawisay inay Ciidanka Kenya ka fara maroojiyaan gaarigaasi.
Shabaabka oo dagaal adag kula jira Ciidanka Kenya, ayaa si joogto ahi ugu weerara deegaanada ay kaga sugan yihiin Gobolada Gedo iyo Jubbada Hoose.